၁။ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ တောင်ပံကစားသမား အိုင်ဗန် ပါရီဆစ်အတွက် တရုတ်ကလပ် ရှန်ဟိုင်း ရှင်ဟွာထံကနေ ယူရို ၂၅ သန်းတန် ကမ်းလှမ်းချက် ရရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ပါရီဆစ်ကို ရောင်းထုတ်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။
၂။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဗလင်စီယာအသင်းက ဘရာဇီးလ် ဂိုးသမားနီတိုကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို ၂၅ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းက နယ်သာလန်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမား ဂျက်စပါ စီလက်ဆင်ဟာလည်း ဗလင်စီယာအသင်းထံ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်ကြယ်ပွင့် ကိုင်လီယန် အမ်ဘာပေကို ခေါ်ယူဖို့ ကာလရှည်ပစ်မှတ်ထား ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ၂၀၂၀ နွေရာသီမှာ အပြီးသတ်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ရေရှည်စီမံကိန်းချပြီး ကြိုးပမ်းသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းက အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် လူငယ်ကြယ်ပွင့် ကစားကွက်ဖန်တီးရှင် ကီယန် ဘရက်ကင်ကို ခေါ်ယူဖို့ ဘာစီလိုနာအသင်းက စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။
၅။ စပါးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ခရစ္စတီယန် အဲရစ်ဆင်ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလာပြီးတဲ့နောက်မှာ မန်ယူ ဒါမှမဟုတ် ဂျူဗင်တပ်အသင်းထံကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။
၆။ အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ နည်းပြ အန်တိုနီယို ကွန်တီဟာ အသင်းက ကွင်းလယ်လူ ရက်ဒ်ဂျာ နိုင်ဂိုလန်ကို ရောင်းထုတ်သွားဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ Calcio Mercato. သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၇။ ဘာစီလိုနာအသင်းက ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဖီလစ်ပီ ကော်တင်ဟိုကို ခေါ်ယူဖို့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစားနေပြီး ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဂျူဗင်တပ်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် ရိုဒရီဂို ဘန်တန်ကာကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အငျတာမီလနျအသငျးဟာ တောငျပံကစားသမား အိုငျဗနျ ပါရီဆဈအတှကျ တရုတျကလပျ ရှနျဟိုငျး ရှငျဟှာထံကနေ ယူရို ၂၅ သနျးတနျ ကမျးလှမျးခကျြ ရရှိထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ အငျတာမီလနျအသငျးဟာ ပါရီဆဈကို ရောငျးထုတျဖို့ စိတျဆန်ဒရှိနပေါတယျ။
၂။ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ဗလငျစီယာအသငျးက ဘရာဇီးလျ ဂိုးသမားနီတိုကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို ၂၅ သနျးနဲ့ ချေါယူလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးက နယျသာလနျလကျရှေးစငျဂိုးသမား ဂကျြစပါ စီလကျဆငျဟာလညျး ဗလငျစီယာအသငျးထံ ပွနျလညျပွောငျးရှတေ့ော့မှာဖွဈပါတယျ။
၃။ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးဟာ ပီအကျဈဂြီတိုကျစဈကွယျပှငျ့ ကိုငျလီယနျ အမျဘာပကေို ချေါယူဖို့ ကာလရှညျပဈမှတျထား ကွိုးပမျးတော့မှာဖွဈပွီး လာမယျ့ ၂၀၂၀ နှရောသီမှာ အပွီးသတျချေါယူနိုငျဖို့ ရရှေညျစီမံကိနျးခပြွီး ကွိုးပမျးသှားတော့မှာဖွဈပါတယျ။
၄။ မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးက အသကျ ၁၅ နှဈအရှယျ လူငယျကွယျပှငျ့ ကစားကှကျဖနျတီးရှငျ ကီယနျ ဘရကျကငျကို ချေါယူဖို့ ဘာစီလိုနာအသငျးက စိတျဝငျစားနပေါတယျ။
၅။ စပါးအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျလူ ခရစ်စတီယနျ အဲရဈဆငျဟာ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးထံ ပွောငျးရှခှေ့ငျ့ရဖို့ အခှငျ့အလမျးနညျးပါးလာပွီးတဲ့နောကျမှာ မနျယူ ဒါမှမဟုတျ ဂြူဗငျတပျအသငျးထံကို ပွောငျးရှဖေို့ စိတျဝငျစားနပေါတယျ။
၆။ အငျတာမီလနျအသငျးရဲ့ နညျးပွ အနျတိုနီယို ကှနျတီဟာ အသငျးက ကှငျးလယျလူ ရကျဒျဂြာ နိုငျဂိုလနျကို ရောငျးထုတျသှားဖို့ အစီအစဉျမရှိဘူးလို့ Calcio Mercato. သတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
၇။ ဘာစီလိုနာအသငျးက ကှငျးလယျတိုကျစဈကစားသမား ဖီလဈပီ ကျောတငျဟိုကို ချေါယူဖို့ ပီအကျဈဂြီအသငျးက ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနပွေီး ချေါယူနိုငျဖို့ နီးစပျနပွေီဖွဈပါတယျ။
၈။ ဂြူဗငျတပျအသငျးဟာ သူတို့ရဲ့ကှငျးလယျကွယျပှငျ့ ရိုဒရီဂို ဘနျတနျကာကို ၂၀၂၄ ခုနှဈအထိ စာခြုပျ သကျတမျးတိုးမွှငျ့လိုကျပွီဖွဈပါတယျ။